Asa fanasoavana Teny Antanimora i Bodo
Fanesorana ireo mpiasa ECD Sahirana ara-bola ny fanjakana ?
Taorian` ny baiko nomen` ny Filoham-pirenena, nandritra ny filan-kevitry ny ministra, 27 febroary lasa teo, dia tsy hisy intsony ny fandraisana ireo mpiasa ao anatin` ny fifanarahan` asa « Emploi de Courte Durée » na ECD.
Ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo Olona 264 000 mahazo tan-tsoroka
Nisokatra tamin’ny fomba ofisialy omaly teny amin’ny Lapan’ny Tanàna Analakely ny fampiratiana hoenti-mampahafantatra ny tetikasa « Asotry », miompana ady amin’ny tsy fanjarian-tsakafo tohanan’ny fanjakana Amerikanina.
Mamo sy miboridana imasom-bahoaka Voararan’ny lalàna ary mety mampigadra
Mihamaro hatrany ireo olona misotro toaka ankehitriny. Tsy hanavahana intsony ity tranga ity na lahy na vavy fa saika lasa fialam-bolin’ny rehetra mihitsy. Manampy trotraka izany rahateo ny fisiana toeram-pivarotan-toaka isaky ny 150 metatra raha kely, indrindra any amin’ny faritra iva.
Ho tohin’ny asa efa fananganana trano famakiam-boky efa nataony tamin’ny taona 2005-2006 dia tonga nanohy ny asa fanasoavana ireo vehivavy sy ankizy voafonja etsy amin’ny fonjaben’Antanimora omaly i Bodo sy ny fikambanana misy azy.
Bisikoitra, boky fianarana mahandro sakafo sy fianarana manjaitra, akanjo, savony sy vovon-tsavony niampy fotsim-bary sy siramamy tamin’ny kitapo maromaro no natolony tamin’izany ho fampaherezana ireo vehivavy voafonja mahatratra 400 isa miampy ireo zanany kely tsy manan-tsiny miisa 22. 15 taona no zandriny indrindra amin’ireo vehivavy ireo raha 70 taona no zokiny indrindra. Efa-taona kosa no zokiny indrindra amin’ireo ankizikely izay fantatra fa tsy manan-kavana afaka hitaiza azy ety ivelany ka tsy maintsy mijanona miaraka amin-dReniny ao amin’ny fonja saingy mianatra any amin-dry masera kosa. Tanjon’i Bodo mpihira amin’izao hetsika nataony izao raha araka ny fanazavany ny mba hahafahana manamaivana ny vesatry ny fiaraha-monina amin’ny fikarakarana ny voafonja no sady fanomanana azy ireny hiverina eny anivon’ny fiaraha-monina sahady. Nomarihin’ity mpanankato sady Renim-pianakaviana ity manokana moa fa anisan’ny zavatra tsikariny ny fitombon’ireo voafonja tazonina ao amin’ny fonjaben’Antanimora. Tafiditra ao anatin’izany ireo zaza tsy manan-tsiny izay nahitsiny fa tokony hojerena manokana satria tsy toerana sahaza azy ireny ny eny am-ponja. Tsiahivina moa fa lisitra faharoa hirotsaka hofidiana ho solombavambahoaka ao amin’ny Boriborintany fahatelo i Bodo mpihira.